Daqiiqad maamusnaan oo lagu maamuusay dhacdadii Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Daqiiqad maamusnaan oo lagu maamuusay dhacdadii Stockholm
La cusbooneeyay måndag 10 april 2017 kl 14.45
La daabacay måndag 10 april 2017 kl 11.11
Löfven: Bulshada oo dhan ayaa idin garab taagan
Calammada oo hoos loo dhigay. sawir: Christine Olsson/TT
Daqiiqda aamusnaan ayaa lagu xusi doonaa maanta saacaddu markay tahay 12:00 duhurnimo, falkii ka dhacay magaalada Stockholm galab-nimadii jimcadii ina dhaaftay.
Madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven oo ka qayb qaatay, isaga oo ku sugan magaalada Göteborg oo uu ka socdo shir-weynihii xisbiga Socialdemokraterna ayaa uga tacsiyadeeyey dadyoowga dhibaatadu ka soo gaartay iyo dhammaan bulshada reer Sweden. Löfven ayaa sidoo kale sheegay inay dawladdiisu xoogga saari doonto sidii ey u dammaanad qaadi lahayd intii tabartooda ah ammaanka dalka iyo bulshada reer Sweden:
- In la waayo ruux la jecel yahay waa midda caqabadda ugu adag ee shakhsi bani’aadam ah la soo gudboonaata. Wax badan ayaan ka fekeray dadkiinii ey ka geeriyoodeen cid aad caalamka ugu jecleeydeen. Waxaad xambaar-san tihiin xasuustii. Wada-hadalkii, araggii, qosolkii. Waxaan un jeclaan lahaa inaan iraahdo ”murugadaa keli kuma eydaan tihiin”. Waannu idin ka fekereynaa. Sweden oo dhan ayaa garabkiina taagan, sida uu sheegay.
Löfven ayaa sidoo kale ammaan ballaaran u soo jeediyay dhammaan ciddii gacanta ka geeysataya wax-yeeladaasi. Isgaaoona carabaabay ciidanka ammaanka, howl-wadeennada gargaarka degdegga iyo dar-yeelka caafimaadka. Iyo dhammaan intiinni gacanta ka geeysatay la idiinkama mahad-celin karo in ku filan, sida uu sheegay Stefan Löfven, madaxa dawladda Sweden
Sidoo kale ayaa isla wakhtigaa laga furay dhabbada Hantverkargatan, xaafadda Kungsholmen xarun dhexe ee xaaladda degdegga, halkaasina oo bulshada reer Stockholm kula kulmi kari doonaan aqoon-yahanno ey kala xaajoon karaan dhacdooyinkii ey indhaooda ku soo arkeen ee dhacdadii jimcihii ina dhaaftay ka dhacday waddada Drottningsgatan.
– Waa howl muhiimad ballaaran ugu fadhida hayadaha caafimaadka iyo sidii dar-yeel caafimaad ee maskixiyan ah loo siin lahaa ciddii u baahan. Waxaa sidoo kale lagu xoojin doonaa maanta oo isniin ah telefoon lagala soo xiriiri doono howl-wadeenno, sida ay sheegtay Barbro Naroskyin, ahna sarkaalad ka howl-gasha hayad-goboleedka caafimaadka ee gobolka Stockholm.
Dhacdadii jimcadii ka dhacday magaalada Stockholm dabadeed ayey weli sagaal ruux ku kala sugan yihiin laba cusbitaal oo kala duwan. Halka laba ka mid ahi ey xaaladdoodu halis tahay.
Toddoba ka mid ah ayaa qaba dhaawacyo fudud. Hal dhallaan oo ka mid ah dadyoowgii ey wax-yeelladu ka soo gaartay oo axaddii ina dhaaftay cusbitalka ugu jiray dar-yeel caafimaad ayaa lga saarey, sida ku cad war laga soo xigtay hayad-goboleedka caafimaadka.